Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay
Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa Maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho kadib markii uu kasoo bogsaday qarixii uu ku dhaawacmay ee lala eegtay.
Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho waxaa kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, Bahda Saxaafadda, Ehelkiisa iyo qaar kamid ah saaxiibadiis.
Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa ku dhaawacmay qarax Ismiidaamin ah oo lala beegsaday 16-kii Bishii Janaayo, waxaana dhaawac kasoo gaaray lagu soo daaweeyay dalka Turkiga.
Ugu dambeyn wuxuu sheegay in uusan ka tanaasulin u tartamida kursiga Golaha Shacabka, isaga oo ka codsaday Beeshiiska iyo Maamulka Hir-Shabeelle inay fursad u siiyaan in uu ku guuleysto kursiga Golaha Shacabka.
Afhayeen Macalimuu oo si kooban Warbaahinta ula hadlay ayaa u mahad celiyay dadkii garab istaaga u muujiyay markii qaraxa lagu weeraray igo Ra’iisul Wasaaraha, isaga oo sheegay in weerarkaas uu ahaa musiibo uu Alle ka badbaadiyay.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaabilay Macallimuu isagoo muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in uu ka bogsooday dhaawacii gaaray, una rajeeyay in uu ku guuleysto dadaalladiisa uu ku doonayo in uu dalkiisa ugu adeego.
Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa dhawaan tegi doona Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan si uu ugu tartamo kursiga Xildhibaan ee Golaha Shacabka.
Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay was last modified: February 23rd, 2022 by warsan radio
Shiinaha oo ergey cusub u soo magacaabay dalal ay kujirto Soomaaliya